Calaamado Muujinaya In Ninkaada Uu Xariir Kale Leeyahay . | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Calaamado Muujinaya In Ninkaada Uu Xariir Kale Leeyahay .
Calaamado Muujinaya In Ninkaada Uu Xariir Kale Leeyahay .
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 24-08-16 10:23 AM Haweenka ayaa la tilmaamaa in ay leeyihiin dareen ka xooggan kan ragga waana marka ay timaado in gacaluyiheeda noloshiisa ay soo gashay haweeney cusub oo durba waa sahal in ay ogaado.
Sidaas oo ay tahay waxa shabakada xayaati warbixintaan ku soo koobeysaa tilmaamo dheeraad ah oo ka saacidaya in durba aad ogaato in xaaladda ninkaada lagu jiro .
* Haddii mar waliba uu mashquul ku yahay taleefankiisa gacanata waliba telkiisa ii daqiiqad daqiiqad uu helayo fariin qiraaleed arinta la yaabka ahna ay tahay in uusan aqrineyn fariimahaas marka uu kula joogo dhab ahaan xaaladda ma fadhido.
Sidoo kale haddii uu marwaliba telkiisa ka tir tiro fariimaha dhab ahaan tilmaan foojignaan ah ayay tilaameysaa waxa ayan u badaan tahay in noloshiisa ay haweeney kale soo gashay .
* Haddii uu door bidayo in kaligiis uu baxo halka horay u ahaa mid aad wada bxii jireen marka magaalada aadeysaan balse haatan uu bataatan jecleysaneyn in aad raacdo taasina iyana shaki badan ayay abuureysaaa.
* Hurdo Kala Kala Go`an , haddii aad saq dhexe soo kacdo waliba kuaragto in uusan joogin meeshii aad ku ogeyd oo jikiadaama fadhigameereysanayo kuna hadloayo teleefan balse marka soo kacdo uu durbo jarayo wax ka qarsoon malaha masrax.net waxa ay ku leedahay la shuureey odayga .
Ugu dambeyn haddii aad ka dareento in jirkiisa u ka soo carfayo udoon naageed sida catar ama barfoon iyana waad ku ogaan kartaa waxa uu odayga qarinayo waana cadeyn buuxda .
Fiiro Gaar Ah : maqaalkaan ugaam talo galin in aan qoyays is jecel ku bur burnno balse waa talo guud inkastoo diinteena inoo ogashay 4 xaas laakiin waa mid la jaanqaadeysa xaaladda markaasi labaadlamaane ku sugan yihiin , tusaale ninka ma awoodaa nolosha xaas.